နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: သြဂုတ်လ 22, 2017
Lottery.com မှာကျနော်တို့ကအရမ်းအလေးအနက်ထားသင့်ရဲ့လုံခြုံရေးနှင့်လိမ်လည်မှုအစီရင်ခံစာများယူပါ။ တစ်ထီဘုတ်အဖွဲ့သို့မဟုတ် Lottery.com ၏န်ထမ်းဖြစ်ဟန်ဆောင်စခွေငျးငှါအဘယ်သူသည်ထီလိမ်လည်သူများကို၏အစီရင်ခံစာများရှိပါတယ်ကြပြီ သူတို့အမှန်တကယ်ထီအမှတ်တံဆိပ် (ရပ်တည်ခဲ့ပြီး၎င်း၏နောက်တွင် Powerball သို့မဟုတ် Mega သန်းနဲ့ချီတဲ့) နှင့် Lottery.com ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်သုံးနိုင်ပါသည်။
Lottery.com န်ထမ်းလိမ့်မည် ဘယ်တော့မှ ပိုက်ဆံအဘို့အသငျသညျကိုမေးပါ။
အမည်မသိလက်ခံရရှိသူထံသို့ငွေပို့ဘယ်တော့မှမ။ ဤသည်မှာစစ်ဆေးမှုများ, ပိုက်ဆံအမိန့်, ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ်များ, ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပေးချေမှုတခြားအမျိုးအစားပါဝင်သည်။
Lottery.com ပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းရန်သင်မေးဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ သင့်အတွက်ငွေပေးချေမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသာ app ကိုအတွင်းထီကစားရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ သင့်အကောင့်ရန်ပုံငွေ, သငျသညျကိုသာ Lottery.com app ကိုအတွင်းဒါလုပ်ပါ။
အားလုံးအရောင်းအပု Lottery.com app ကိုအတွင်းစီမံခန့်ခွဲရသည်။ ငွေပေးငွေယူ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို, ဒါမှမဟုတ်ငွေပေးချေမှုမဆိုအမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်. သငျသညျကိုဆက်သွယ်သူကိုမဆိုတတိယပါတီများတုံ့ပြန်မထားပါနဲ့။
သငျသညျ Lottery.com နှင့်အတူကစားလျှင်ထီအနိုင်ရအကြောင်းကိုမဆိုမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များတုံ့ပြန်မထားပါနဲ့။ Lottery.com app ကိုအတွင်းကိုတိုက်ရိုက်သင်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။
သင်၏နာမကိုအမှီပါဝင်သော app ကို, လိပ်စာ, ဘဏ်အကောင့်အချက်အလက်တွေ, လူမှုဖူလုံရေးနံပါတ်, PIN သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏ပြင်ပတွင်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်မပေးပါဘူး။
သင်တစ်ဦးဆုရှင်အနေဖြင့်သင်ကပြောပြခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတောင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်အီးမေးလ်များကိုသတိပြုပါ။ နောက်တဖန်, ငါတို့အကြောင်းသင်တို့ကိုမခေါ်ပါလိမ့်မယ်, အမြဲတမ်း app ကိုအတွင်းသငျသညျကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။
Scan ကိုအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးတိုင်ကြားချက်မှ, (877) မှာဖက်ဒရယ်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင် (FTC) ကိုဆက်သွယ် FTC-အကူအညီသို့မဟုတ် http://www.ftc.gov/crossborder.
ဒီနေရာမှာတစ်ဦး, SAMPLE ထီလိမ်လည်မှုကိုအီးမေးလ်ဖြစ်ပါသည် - EMAIL သည်ဤအမျိုးအစားတုံ့ပြန် OR ကိုမနှိပ်နဲ့:
Prime ထီ INTERNATIONAL
ref: AFP / 34085746305872 / 34
ကျနော်တို့ပျော်ရွှင်စွာသင်တို့ဆီသို့ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်, တောင်အာဖရိကအတွက်မတ်လ, 27 ၏ 2017th ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သောဗြိတိန်-LOTTO တင်ရေးထီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ၏မဲနှိုက်ကြေညာ။ လက်မှတ်အရေအတွက်ကတွဲသင့်ရဲ့ e-mail လိပ်စာ: ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် 564nd ကဏ္ဍကိုသင်ထီအနိုင်ရခဲ့သည့် 75600545188-5368-02-19-6-26: Serial number ကို 17 / 35 နှင့်အတူ72 ဟာကံကောင်းနံပါတ်များကိုဆွဲငင်။
သငျသညျထိုကြောင့်, အမေရိကန် $ 2,500,000.00 သန်းဒေါ်လာတစ်ဦးစုစုပေါင်းငွေသားဆုထံမှ 9023118308 / 03.This ဖြစ်ပါသည် / ktu file မှအသိအမှတ်ပြုအတွက်ငွေသားအမေရိကန် $ 2.5 (နှစ်ဦးသန်းငါးရာတစ်ထောင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒေါ်လာ) ၏စုစုပေါင်းပေါင်းလဒ်တောင်းဆိုဖို့အတည်ပြုပြီ ဤကဏ္ဍတွင်ပထမကိုး (9) ကံကောင်းဆုရရှိသူအကြားမျှဝေပေးတယ်။
အားလုံးသင်တန်းသားများကိုကွန်ပျူတာမဲနှိုက်သည့်စနစ်မှတစ်ဆင့်က World Wide Web site မှကျပန်းရွေးချယ် 100,000 ကုမ္ပဏီများမှကျော်ထံမှထုတ်ယူခဲ့ကြသည်။ ဒီအမြှင့်တင်ရေးကိုနှစ်စဉ်ရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ သင့်ရဲ့ပြဇာတ်ကူပွန်အတွက်ညွှန်ပြအဖြစ်သင့်ကံကောင်းကအနိုင်ဂိုးအရေအတွက်ကဥရောပ၌အကြှနျုပျတို့၏ဥရောပစာအုပ်ငယ်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးခန်းအတွင်းကျရောက်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ဒီအမြင်တွင်, သင့်ကိုအမေရိကန် $ 2,500,000.00 (နှစ်ဦးသန်းငါးရာတစ်ထောင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒေါ်လာ) ဥရောပ၌အကြှနျုပျတို့၏ငွေပေးချေမှုရုံးအားဖြင့်သင်တို့ကိုမှဖြန့်ချိမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥရောပအေးဂျင့်ကိုချက်ချင်းအဖြစ်မကြာမီသငျသညျသူ့ကိုဆက်သွယ်ပါအတိုင်းသင်၏ရန်ပုံငွေလွှတ်ပေးရန်လွယ်ကူချောမွေ့ရန်ဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏ဆုတောင်းဆိုဖို့မထိုက်မတန်ယူဆပါသည်လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သင်သည်သင်၏တောင်းဆိုမှုများမှီတိုင်အောင်လျှို့ဝှက်သင့်ရဲ့အနိုင်ရတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အကြံပေးကြသည်လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင့်ပိုက်ဆံသမျှထုံးစံ၌သင်တို့ဆီသို့လွတ်။
ဤသည်အချို့သောမသမာသောဒြပ်စင်များကဤအစီအစဉ်၏ဟုဆိုကာနှစ်ဆနှင့်ဝရမ်းမဲ့အလွဲသုံးစားမှုမှရှောင်ရှားရန်, ငါတို့ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သတိပေးခဲ့သည်လိမ့်ပေးပါ။
မစ္စတာရစ်ချတ် Diwar: သင်၏အရေးဆိုမှု file, ငါတို့ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်အေးဂျင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
မလိုအပ်သောနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများမှရှောင်ရှားရန်, ကျွန်တော်တို့ကိုသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ designated အေးဂျင့်နှင့်အတူမည်သည့်စာပေးစာယူ၌သင်တို့၏ရည်ညွှန်း / အသုတ်နံပါတ်များကိုကိုးကားပါ။